पाकिस्तान पुगे सन्दिप ! भयो भब्य स्वागत , यस्तो छ पाकिस्तान जानुको कारण - Maxon Khabar
Home / Sports / पाकिस्तान पुगे सन्दिप ! भयो भब्य स्वागत , यस्तो छ पाकिस्तान जानुको कारण
पाकिस्तान पुगे सन्दिप ! भयो भब्य स्वागत , यस्तो छ पाकिस्तान जानुको कारण
२०७५ फागुन २४:
नेपाली क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेकाे टिम पाकिस्तान सुपर लिगका लागि लाहोर कलन्दर्स कराँची पुगेकाे छ । टिमसँगै सन्दिप र उनका म्यानेजर रमन सिवाकाेटी पनि कराँची पुगेका छन । याे खेल नेपाली समय अनुसार पाैने ८ बजे सुरू हुनेछ ।
पुर्व निर्धारीत तालिका अनुसार लाहाेरले बाँकि खेल घरेलु मैदानमा खेल्ने बताइएकाे थियाे । तर भारत र पाकिस्तान विचकाे तनावका कारण सुरक्षाका कारण अन्तिम समयमा कराँचीमा सारिएकाे हाे । युएईमा २६ खेल खेलेपछि बाँकी खेल खेल्न सहभागि ६ वटै टोली पाकिस्तान गएका छन। पीएसएलमा बाँकि रहेका सबै खेल कराँचीमा हुनेछ।
यसअघि ६ खेल कराँची र २ खेल लाहोरस्थित गद्दाफी स्टेडियममा हुने भनिएकाे थियाे । लिग चरणमा ४ खेल बाँकी छन, जसमा सन्दीपको लाहाेरले बाँकि रहेका २ खेलमा भोली इस्लामावाद युनाइटेडसँग खेल्दैछ। भाेलीकाे खेलमा नेपाली खेलाडी सन्दिन टिममा पर्ने प्रबल संभावना रहेकाे छ । ८ खेलमा ३ खेल मात्र जितेको लाहोर ६ अंकसहित अंक तालिकाको पाँचौ स्थानमा छ।
त्यसैले उसका लागि भाेलीकाे खेल गर या मरकाे अवस्थामा रहेकाे छ । लाहोरले अन्तिम लिग खेलमा सोमवार मुल्तान सुल्तानसँग खेल्नेछ। यदि भाेली लाहाेर पराजित भएमा उसकाे प्लेअफकाे संभावना लगभग समाप्त हुनेछ । प्रतियाेगितामा सन्दीपले १० विकेट लिएका छन । उनले क्वेटा ग्लाडिएटर्स विरुद्ध ४ विकेट लिएका थिए।